inverter waajibaadka xawaaraha doorsoomaha ah ee matoorka AC Inverter Drive motor
AC inverter waajibka wadida xawaaraha isbeddelka gawaarida
Naqshadeynta Moodeelka Cusub
Alaab-qeybiye caalami ah, dhoofiye, iyo qaybiyaha IEC inverter waajib motor, Variable Speed ​​Inverter Motor
Naqshadeynta waajibaadka matoorka
Ujeedada Guud vs. Inverter Waajibaadka
Mashiinka rogaal celinta waa feker cusub oo cusub oo lama huraan noqday
maaddaama matoorrada ay bilaabeen inay kaxeeyaan VFDs (rogayaasha ama darawalada AC). mootada iec inverter, Darawallo badan oo isdaba joog ah oo isdaba joog ah ayaa lagu kala soocay nooca wareegga qalabka wax lagu beddelo ee loo isticmaalo VFD. 100 hp inverter waajibaadka saaran, Inverter-waajibaadka waa fikrad cusub oo cusub oo lagama maarmaan noqotay maadaama matoorrada ay bilaabeen inay wadaan VFDs. hal wajiga halbeegga gawaarida gawaarida, korantada warshadaha matoorrada waxaa laga heli karaa inta badan codsiyada iyo howlaha guud ahaan ujeedooyinka. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah codsiyada xawaaraha AC Variable Speed ​​waxay ubaahan yihiin xawaare joogto ah.
Noocyada AC Motors
Gawaarida korantada warshadaha ayaa loo heli karaa inta badan codsiyada guud iyo howlaha.
Hordhac Dheeri ah
Haddii mid ka mid ah alaabtan adigu iska leedahay, fadlan nala soo xiriir! Diyaar ayaan nahay oo waxaan rajeynaynaa iskaashigeenna. Waxaan u qaadanaa tayada faa iidada iyo qiimaha ugu hooseeya sida daacada. Darawal isdabajoog ah oo isdaba joog ah (VFD) waa nooc ka mid ah koontaroolayaasha mootada ee kaxeeya mootada korantada iyadoo lagu kala duwan yahay inta jeer iyo danab ee korantadeeda. Washdown iyo Rinjiga Bilaashka ah ee matoorradeena AC Inverter Drive-ka waxaa loogu talagalay xawaaraha la hagaajin karo.
Nagu Saabsan & Adeegyada
Loogu talagalay Gawaarida Inverter
Kali ilaa Seddex Waji VFD Qaabka la awoodi karo ayaa ah iibsashada hal waji oo isdabajoog ah (VFD) si shaqada loo qabto. PowerDrive's 3000 Watt power inverter wuxuu ka kooban yahay teknoolojiyadda wireless-ka ah ee Bluetooth oo leh isdhexgal APP ah oo loogu talagalay helitaanka meelaha fog fog oo kuu ogolaanaya inaad si fudud u qaabeyso goobaha. Mashiinka rogaal celinta waa fikrad cusub oo cusub oo lama huraan noqotay maadaama matoorrada ay bilaabeen inay wadaan VFDs.
Ma u baahan tahay oraah?